ပင်မစာမျက်နှာ အာရှဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Fyodor Smolov ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဇူလိုင်လ 23, 2018
LB အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်အားဖြင့်လူသိများသူတစ်ဦးရုရှားဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "Fedor"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Fyodor Smolov ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ analysis သူ့ကိုအကြောင်းကို (နည်းနည်းလူသိများ) ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်များစွာသော OFF-အသံအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းအတွက် Fyodor သည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ဂိုးတွေအများကြီးသွင်းယူထားပြီးသိတယ်။ သို့သော်တစ်ခုသာလက်အနည်းငယ်ပရိသတ်တွေအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Fyodor Smolov ရဲ့ဇီဝအကြောင်းအများကြီးကိုငါသိ၏။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Fyodor Smolov ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
Fyodor Mikhaylovich Smolov ကသူ့မိခင်, Irina Smolova နှင့်ဖခင် Saratov, အနောက်တောင်ပိုင်းရုရှားတွင် Mikhail Smolov မှဖေဖော်ဝါရီလ9၏ 1990th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ရှေးရိုးစွဲမူပိုင်ခွင့်၏တစ်ခုတည်းသောသားနှင့်ကလေးအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။
ဆိအဖြစ်, Fyodor ရဲ့မိသားစုရုရှားရဲ့ Saratov မြို့ဆင်ခြေဖုံး၏ရာဇဝတ်မှု-စီးရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ကသူ၏မိဘများ '' ကိရိယာယောက်ျားလေးများရဲ့မကောင်းတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကနေသူတို့၏သားကာကွယ်အတော်ကြာနည်းလမ်းများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေများကိုအတူတက်ဖော်စပ်မိမိသားကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့တခြားခုနှစ်တွင်သူ၏ဖခင် Mikhail မှတ်ပုံတင်ဘို့မိမိတို့နေအိမ်မြို့ဘောလုံးကလပ်, Sokol မှ Fyodor ယူခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ Fyodor Smolov (သူ၏နေအိမ်မြို့ဘောလုံးကလပ်၏ပရိတ်သတ်မဟုတ်ခဲ့Sokol Saratov) ရှိရာမိမိအဘသည်သူ၏လူငယ်ကစားသမားဘစတင်သူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။ သူ၏စိတ်နှလုံးနှင့်အတူရှိ၏ "Lokomotiv မော်စကို" ရုရှားရဲ့မှာတည်ရှိပါတယ် မြို့တော်။ သူကသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်အိပ်မက်မက်ရှိရာဤသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူဟာတစ်နေ့မှာကလပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာ၏အိပ်မက်ကိုမြင်မက်ခဲ့သည်။ ကြောင်းဖြစ်ပျက်စေရန်မဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များကိုရှိခဲ့သည်သိရပြီးမှ, Fyodor Smolov သူကိုထောကျပံ့မပြုခဲ့ကလပ်နှင့်အတူဆက်လက်။ မိမိအဘ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သူ၏လူငယ်ကစားသမားဘအောင်မြင်မှုတခုတခုအပေါ်မှာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
Fyodor Smolov အစဉ်မပြတ်လူငယ်ဘောလုံးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှရုန်းကန်။ သူကပင် 14 ၏အသက်အရွယ်မှာမိမိဘောလုံးစာမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ဤသည်သူ၏ဖခင်သည်သူ၏နည်းနည်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အားကစားနှင့်အတူချည်ထားနှင့်ကုန်ခဲ့ပါတယ်ခံစားရရန်စတင်နေတဲ့အချိန်ပဲ။ သူ့ဖခင်ထို့နောက်သူ့သားသည်အခြားကလပ်ထဲကနေ, ဒီအချိန်နောက်ဆုံးဘောလုံးစာမေးပွဲယူသင့်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။ Mikhail သူစတုတ္ထလာမယ့်စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်မပြုခဲ့လျှင်မိမိသားကိုဘောလုံးဖြတ်မယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, Fyodor Yegoryevsk ထံမှအသစ်သောဘောလုံးကလပ်မာစတာ Saturn, မော်စကိုဒေသကနေစာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး။ သူတို့ကဝမ်းမြောက်စွာသည့်အလားအလာငယ်ရွယ်လူကလေးဝန်ခံနှင့် Fyodor သည်သူ၏အနှစ်သက်ဆုံးအားကစား၌သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်မှဆက်လက်ပြောကြားသည်။ သူကနောက်ဆုံးတော့သူ 2006 မှ 2007 အကြားကစားဘယ်မှာ Saturn မော်စကိုမှာမိမိလူငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
16 မှာ Fyodor Smolov Dinamo မော်စကိုနှင့်အတူပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဤအချိန်သူတစ်ဦးရည်မှန်းချက်စက်ဖြစ်လာမယ့် steely သူ့အိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာစေရန်ပြဌာန်းခွင့်နှင့်သူ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူသိမ်းယူဖြစ်လာခဲ့သည့်သွားတာဖန်စီမရဖြစ်ခဲ့သည်။ အဖြစ်ဝေးသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပုံပြင်သက်ဆိုင်ရာအတိုင်း, t ကိုသူတို့က, ယခုသမိုင်းဆိုအဖြစ်သူသည်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ။
Fyodor Smolov ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
တိုင်းအကြီးလူကိုနောက်ကွယ်မှာရှိတစ်ဦးအကြီးအမြိုးသမီးတင်, ဒါမှမဟုတ်နိုင်အောင်စကားကိုတတ်၏။ နှင့်နောက်ကွယ်မှနီးပါးတိုင်းအောင်မြင်သောရုရှားဘောလုံးသမားတစ်ဦးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဇနီး, ဖျားခါသို့မဟုတ်ရည်းစားရှိတယ်။ တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ, Fyodor ရဲ့ဒီကဗျာစွမ်းရည်, အဖြစ်အစေးကိုချွတ်သည်သူ၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့သူ့ကိုတစ်ပြည့်စုံရုပ်ပုံတည်ဆောက်ကြလော့။
2012 ခုနှစ်တွင်သူသည်မိမိအသင်းဖော်မှာ (Yuri Zhirkov ရဲ့) မွေးနေ့ပါတီရုရှားမော်ဒယ်နှင့်တီဗီအိမ်ရှင်မ, ဗစ်တိုးရီးယား Lopyreva တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူမ၏အလှကနေတရားစီရငျသောကြောင့်ဗစ်တိုးရီးယားအလှမယ်ရုရှားနိုင်ငံ 2003 အလှမယ်၏ဆုရှင်ခဲ့ကြောင်းပြည်နယ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
မှတ်သားဖို့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်, ဗစ်တိုးရီးယား Lopyreva သူမ၏လူထက်7နှစ်ပေါင်းအဟောင်းတွေဖြစ်တယ်။ ဤအချက်ကို, သို့သော်, ပိုပြီးအရေးကြီးတာကဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်မှမိမိတို့အလေးအနက်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဟာတစ်မူထူးခြားတဲ့ [အတွက်ဖြစ်ပျက်သောလက်ထပ်ထိမ်းမြားအဆိုပြုချက်ကိုမတားဆီးခဲ့ဘူးအဘယ်သူမျှမ-လက်စွပ်] စတိုင်။ ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာလတွင်အချစ်ငှက်များ၊ Lopyreva နှင့် Fyodor တို့သည်မော်လ်ဒိုက်တွင်လှပပြီးရင်ခုန်စရာမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့သည်။ သူတို့အိမ်ထောင်မပြိုကွဲခင်နှစ်နှစ်သာကြာခဲ့သည်။ ပါတီနှစ်ခုလုံးသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဆက်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
Fyodor ရဲ့မိခင်အားဖြင့်ကရှင်းပြသည်အဖြစ်သူတို့ရဲ့ကွာရှင်းမှုအတွက်အသေးစိတ်အကြောင်းပြချက် Fyodor Smolov မိသားစုအချက်အလက်အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပါရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှားမီဒီယာ, သို့သော်, Fyodor Smolov Miranda Shelia အောက်ပါပုံသည်အခြားရုရှားမော်ဒယ်ကိုမြင်လျှင်ရမည်ကောလဟာလသတင်းများအရခဲ့သည်အဖြစ်ကွာရှင်းလာသည်ဟုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
(အထက်ပုံ) Miranda မကြာခဏနှိုင်းယှဉ်ကြောင်းသတိပြုပါရန်ဆိုင်တဲ့ဒါဟာဖြစ်ပါသည် Irina Shayk, ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့သူအခြားလှပသောမော်ဒယ် စီရော်နယ်ဒို ''s ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့။ အဆိုပါ 2016 ယူအီးအက်ဖ်အေဥရောပချန်ပီယံရှစ်မှာရုရှားရဲ့ဆငျးရဲသောစွမ်းဆောင်ရည်ပြီးနောက် Fyodor သူ့ရည်းစား Miranda Shelia အတူတက်ခြိုးဖဲ့၏။
တနည်းကား, ကျဆုံးခြင်း 2016 အတွက်ရုရှားမီဒီယာမေတ္တာတော်ကိုကြွက်ကတော့ 2015 အလှမယ်ရုရှားကဆုရသူဆိုဖီယာ Nikitchuk ချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့သောသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
Fyodor Smolov ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုအချက်အလက်
မိခင်: မိမိချစ်ရာသခင်၏သားနှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ Irina Smolova Fyodor ၏မယ်တော်သည်။
Fedor Smolov ရဲ့အမေပထမဦးဆုံးလူသိရှင်ကြားမော်ဒယ်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတင်ဆက်သူဗစ်တိုးရီးယား Lopyreva နှင့်အတူသူမ၏သား၏ကွာရှင်းပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါသည်။ သူမသည်သူမ၏သားရဲ့နှလုံးသူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိုအပ်ချက်များသူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏စောင့်ရှောက်မှုတာမဟုတျဘဲသူမ၏အချိန်အများကြီးယူတဲ့သူကသူ့ဇနီးနားမှာကျိုးပဲ့ခဲ့ဝန်ခံခဲ့သည်။
Irina ကစားသမားများနှင့်မော်ဒယ်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးနာကျင်အဖွဲ့ဟာမှတဆင့်ဖြစ်ရပြီဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားခဲ့ကြသည်။ သူမနှင့်ဗစ်တိုးရီးယားကအရမ်းနွေးဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်, နှင့်ဟောင်းသမီး-In-ဥပဒ touchingly သူမ၏ကိုခေါ် မိခင်။ သူမ၏စကားများအတွက် ...
"သူတို့အတူတူပါသောသုံးနှစ်များတွင်ကျွန်မသူမမေမေငါ့ကိုခေါ်သောအခါသူကဒါကြောင့်ထိထိမိမိနှင့်ချော့မော့ခဲ့, သူမ၏နှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Vikas နဲ့ကျွန်မ "အခုလုံးဝပုံမှန်လမ်းအတွက် communicate ။
"ကျွန်မသင်တန်း၏, မပြောနိုင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပဲသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ Fyodor ဘို့က hard အလုံအလောက်ခဲ့: ငါထင်သူသူမ၏ချစ်တော်မူ၏။ ဒီတစ်ခါလည်းတစ်ချိန်ချိန်, အကွာအဝေးအပျက်သဘောဆောင်သောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။
Fyodor သင်တန်းစခန်းတွင်လေ့ကျင့်ရေးဖြစ်တဲ့အခါ, ဗစ်တိုးရီးယားလည်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင်အလုပ်များဖြစ်ပါသည် - သူမကတစ်ဦးတီဗီတင်ဆက်သူနှင့်ဖက်ရှင်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါသည်, သူမမြင့်မားဝယ်လိုအားအတွက်အောင်မြင်သောဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူမ၏အလုပ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်နေရာရာက Fyodor ဘို့အချိန်မရှိခြင်းကြီးထွက်လှည့်။ သူကအိမ်မှာနှစ်သိမ့်ချစ်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်, အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူနှင့်အတူဖြစ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်သူတစ်ဦးကမိန်းကလေး, "သူ့ကို fit ရမယ်ဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Irina Smolova (Fyodor Smolov ရဲ့အမေ) ကပြောပါတယ်။
Fyodor Smolov ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကအချက်အလက်
Fyodor Smolov တက်တူး likes ။ အဆိုပါအားကစားသမား 17 မှာသူ၏ပထမဦးဆုံးတက်တူးထိုးခဲ့ရပြီးယခုသူရှိပါတယ်ဘယ်လောက်တက်တူးမပြောနိုင်ပါဘူး။ ယခုဖျူးအပေါင်းတို့သည်သူ၏တက်တူးနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဓာတ်ပုံတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်တစ်ခုတည်းရုပ်ပုံပုံစံဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
သူ 1997 / 98 ရာသီကတည်းကအေစီမီလန်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ကကိုးကား ဂျော့ခ်ျ Weah နှင့် Andriy Shevchenko သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအကြိုက်ဆုံးကစားသမားအဖြစ်။
Fyodor ရဲ့အားနည်းချက်: သူဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားရပ်ကနေအလုပ်လုပ်စေပြီး။ ပိုများသောဒီတော့သူကဒေါသအလျှော့နှင့်ဖော်ရွေမဖြစ်နိုင်ဘူး။
အဘယ်အရာကို Fyodor မကြိုက်: သူကအထီးကျန်, မှိုင်းသို့မဟုတ်ပျင်းစရာအခြေအနေများ, သူ့ကိုသဘောမတူသူတွေကိုဖြစ်ခြင်း, ကျိုးကတိတော်များကိုနှစ်သက်မှုမရှိ။
Fyodor ရဲ့အကြီးမားဆုံးကွောကျရှံ့သောကန့်သတ်သူ့ကိုယ်သူမြင်နေသို့မဟုတ်သတ်ထားပါသည်။ ဒါကသူ့ကိုအအေးနှင့်အာရုံမခံစားနိုင်သောစေသည်။ သို့သော်သူကအချိန်မတန်မီရငျးနှီးဆန့်ကျင်နေတဲ့ကာကွယ်ရေးယန္တရားရှိပါတယ်။ Fyodor ကျန်းမာလမ်း၌သူ၏စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြကိုလည်းမင်းသမီးယုံကြည်စိတ်ချဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါဘောလုံးကစားသမားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံအဖြစ်ညာဘက်သူ့ရဲ့ကလေးဘဝလက်ထက် မှစ. ကိုလည်းစာဖတ်ဝတ္ထု၏ဝါသနာဖြစ်ပါတယ်။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံထောက်ala မာရီယို Puzo နှင့်အာတူရို Perez-ပြန်ပြောင်း, Fyodor Dostoevsky ရဲ့ဝတ္ထုနှင့် Mikhail Bulgakov ရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သည်သူ၏အနှစ်သက်ဆုံးစာအုပ်တွေရှိပါတယ်။
Fyodor Smolov ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဥရောပရဲ့ Big ဒုတ်နှင့်အတူမင်္ဂလာကိုမ
တစ်ဦးဝမ်းနည်းဖွယ်မှတ်စုတွင်, Fyodor Smolov တစ်ချိန်ကနိုင်ငံခြားကလပ်အသင်းအမြဲရုရှားထံမှကစားသမားလက်မှတ်ထိုးရန်တွန့်ဆုတ်ခံစားရကြောင်းလုပျသငျအှနျလိုငျးပြောသည်။ သူ၏စကားအတွက် ...
ချန်ပီယံလိဂ်-Level နှစ်ဖက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်စေဖို့သူတို့လမ်းထဲကမသွားပါလိမ့်မယ်။ ငါလွှဲပြောင်းပြတင်းပေါက်ကာလအတွင်းကမြင်တော်မူ၏။ ငါအချို့ကမ်းလှမ်းမှုရှိခဲ့ပေမယ့်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးဝယ်ထွက်များအတွက်ညာဘက်နှင့်အတူချေးငွေများဖြစ်ကြသည်။ ဥရောပကြီးမားသောကလပ်အသင်းကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ် Grumpy နှင့်လူကန်လန်စဉ်းစားပါ။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Fyodor Smolov ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် !.
ပြုပြင်ထားသောနေ့စွဲ: မေလ 4, 2020
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇူလိုင်လ 23, 2018
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇူလိုင်လ 22, 2018